Roma sy ny tantaran'ny Firenentsika faramparany | Hevitra MPANOHARIANA |
Roma sy ny tantaran'ny Firenentsika faramparany
2012-12-11 @ 11:30 in Politika
Dia iarahan'ny besinimaro mahita ankehitriny ny fitokanana ny "Coliseum de Madagascar" izay mbola andrasana ny ho anarany amin'ny teny malagasy. Manahy anefa aho fa tsy ho tonga izany anarany amin'ny teny Malagasy izany. Koa na dia zava-bita eto Madagasikara aza ny toerana ho fialamboly sy ho fanalan'andron'ny besinimaro dia ho toy ny zava-bahiny letrezana eto an-tanindrazana ihany rehefa tsy hisy fametrahana eny amin'ny rindrina ny anarany amin'ny teny malagasy tahaka izay ahitana azy amin'ny teny vahiny. Raha mijery habaka aterineto vitsivitsy anefa isika dia mety ho gaga fa ny Coliseum na ny Colisée tany Roma [fr] dia tsy izany no anarany tamin'ny voalohany fa Amphitheatrum Flavium [en]. Nahazo ny anarana Colosseum na Coliseum na Colosseo izy noho ny tsangambato goavan'i Nerona Kaisara teo akaiky araka ny nambaran'ny mpahay azy any ambadika any ihany. Ny tsikaritra voalohany dia fiarahan'ny teny Latina sy ny teny Frantsay ny anaran'ilay toerana etsy Antsonjobe.
Dia lasa ny tena nanao fikarohana an-tserasera mifandraika amin'ity anarana Coliseum ity. Voafaritra mazava ny fotoana nananganana azy: Nanomboka ny taona 72 AD, nisy ireo nilaza fa vola azo avy amin'ny nanafihana an'i Jodia sy ny fandrobàna ny tempolin'i Jerosalema [fr] no nananganana ity Coliseum any Roma [fr] ity (fa tsy eto Madagasikara). Natao hampialàna voly ny vahoaka, izay nitaky hatrany ny hananganana toerana fialam-boly ("manara-penitra?") sy hanodinana azy rahateo tsy hiraharaha ny resaka politika, izany hoe tsy hitodika any amin'ny fanonganam-panjakana na fiokoana fanaon'ny olona ambony. Tonga tokoa any amin'ilay hoe rehefa misy ny hohanina sy hotafiana ary hirevena dia inona idray koa no hotadiavina? Fa lasalasa ny saina rehefa mahita fa toa misy itovitovizana tamin'ny tantara sy ny zavanisy tany Roma Fahagola ny zavamisy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
Efa renareo ve fa may ny tanànan'i Roma ny alin'ny 18 jolay 64? Nalaza tokoa izany fahamaizana izany satria faritra maro no tratra, mateti-pitranga ny fahamaizana, araka ny voalaza saingy niavaka izy ity noho ny fifampiteny nifanaovana. Mampahatsiahy ny nitranga teto Madagasikara ny andron'ny 26 janoary 2009 sy ny 27 janoary 2009 ihany koa moa izany. Voampanga ho nandoro ny tanànan'i Roma manko ny kristiana tamin'izany fotoana izany saingy nisy ihany ireo mpahay tantara nanondro fa i Nerona Kaisara no tena atidoha nampandoro ny tanàna mba hanomezana endrika vaovao ny renivohitry ny fanjakana. Fifanandrifian-javatra ve fa nipetraka ho tantara ihany koa fa ankoatra ny fampiadiana ny Gladiatera sy ireo karazana tantara an-tsehatra (anaty rano amin'ny alalan'ny adin-tsambo) dia toerana nampijaliana ny kristiana tao Roma ihany koa ny Coliseum. Izay lafiny izay moa no mba fantatry ny olona tsy mpanaraka ny tantara eoropeana sy fahagola fa mba nitantarana tamin'ny alalan'ny haino amanjery ny tantaran'ny maritiora kristiana tao Roma.
Fantatrao ve fa nisy izany Forum Romanum izany? habaka manana ny anjara toerana manokana eo amin'ny tantara sy fivavahana ary politika satria mifangaro ao avokoa na toera-pivavahana, na toerana fiadian-kevitra (ara-politika) na tsena. Voalaza moa fa io habaka iray io no ivotoerana teorikan'ny fananganana an'i Roma. Somary nanao fampitahana vilana indray ny tena fa nasiana ny kianjan'ny demokrasia ho sehatra fiadian-kevitra sy fanehoan-kevitra tamin'ny voalohany saingy efa mikatona tanteraka kosa ankehitriny ny habaka ho amin'izany eto amintsika. Toerana fampilalaovana ny ankizy sisa ny eny Ambohijatovo amin'izao fotoana izao. Toerana heverina ho tsy iresahana politika intsony. Nentina hananganana ny fanjakan'ny mpitondra ankehitriny fotsiny ilay kianja fa rehefa vita ny nilaza azy dia anarana sisa no mipetraka.
Dia mbola avy indray ny heverina ho mifanentana amin'ny Circus Maximus [en] eto Antananarivo. Ambohipihaonana ara-panatanjahantena, mifandraindraika amin'izany ihany koa ilay anarana ho an'ny Malagasy. Hotokanana amin'ny faran'ny herinandro ihany koa manko ny Kianjan'ny Makis. Toa kisendrasendra nefa tena mahavariana ilay fifanaikaikezana anarana Maximus sy Makis. Satria ny hazakaza-tsoavaly no nalaza tamin'ny andro fahagola nampalaza ny Romana fa ny Rugby kosa no malaza mahavory olona kokoa eto Antananarivo amin'ny ankapobeny rehefa leon'ny mijery baolina fandaka ny mpanaraka izany teo aloha, tsy mahagaga raha mitodika any amin'ny mpankafy ny baolina lavalava ny mpitondra. Dia mbola kisendrasendra indray ve fa raha somary boribory lavalava ny Circus Maximus [fr] dia ny baolina kosa no somary boribory ho an'ny Temple de Rugby araka ny nilazan'ny filohan'ny FAT azy ihany. Kisendrasendra ve fa raha natao hanomezam-boninahitra ny vahoaka sy andriamanitra (latina) ny Circus Maximus dia Anarana hafa iantsoana ny Kianjan'ny Makis ny Tempolin'ny Rugby, nefa rehefa miresaka isika hoe tempoly dia toera-pivavahana no ahafantaran'ny besinimaro azy?
Fa ny tsy tokony ho adinoina dia ny fonenan'ny mpitondra ankehitriny. Iza no efa nahita? izaho tsy mbola nahita fa ny tamin'ny sary kosa dia talanjona aho fa maritrano Romana no hitako ary tsy an-jaza izany endrika izany fa mifanahatahaka amin'ny tranona Amperora na Prefe mihitsy. Jerena amin'ilay andrin-trano fa tena nosafidiana manokana izany maritrano izany tompoko ary mety ho efa nofinofisina hatry ny fahakely! Tsy dia afa-mitompo teny loatra aho satria ny sary ihany no hita fa tsy mbola nahita mivantana. Ka aleo tsy asiana resaka lava fa mba mampieritreritra fotsiny.
Ary ny hopitaly manara-penitra? raha arahina ireo voalaza ireo dia somary naningana ny hopitaly manara-penitra ity. Inona no tena nanosika azy hanao io zavatra tsy mbola fantatra loatra tamin'ny andron'ny Romana ity? Mety ho tsy "ambition" manokana io zavatra iray io fa tolo-kevitra raha jerena ihany koa ny olona akaiky sy mpanolo-tsaina azy izay malaza manana hopitaly goavana eto Antananarivo rahateo. Na izany aza mety ho nisy tantara manokana ihany koa, izay tsy fantatsika raha atao hoe hevitra avy aminy ihany ilay hopitaly.
Farany, am-panombohana ankehitriny ny tetikasa "Lalankely" izay tsarovy fa mampiavaka ny Romana ihany koa ary manatonga ilay fomba fitenenana hoe "Ny lalana rehetra mizotra ho any Roma". Izay tanàna rehetra eo ambany fifehezan'i Roma dia saiky natao rarrivato avokoa ny lalana rehetra. Ny olana: efa nalaza tamin'ny fanaovana lalana sy hanohizana ny lalana ny mpitondra izay naongany ka sarotra ny hamafa ny tsiaro amin'ny alalan'ny "Lalankely" nefa aleo tanterahina ihany. Ny "Lalankely" eto Antananarivo sy ny manodidina no tena mianoka tombontsoa fa ilay lalana noresahin'ny teo aloha kosa hatrany amin'ny farita saro-dalana no nahatongavany ka nodradradradraina fa ny hampitombo ny ambaindain'ny tiko no tena nanaovana azy ireny. Izao anefa tsy maintsy hotanterahina ihany izy ity. Fa raha malalaka ny LALANA mankany amin'ny fahaverezana dia sambatra kosa ny mahita ny LALANKELY mankany amin'ny Paradisa! Amen!
Jentilisa 11 desambra 2012